I-Tweetbot 6 ihlaziywa ngesidlali sevidiyo esitsha | IPhone iindaba
I-Tweetbot 6 ihlaziywa ngesidlali sevidiyo esitsha
Ingelosi Gonzalez | 12/04/2021 23:59 | Iapps zokusebenza, Izaziso
Twitter iye yaba liziko lemithambo-luvo kwezona mpikiswano zibalulekileyo kwezentlalo kwiwebhu. Nangona uninzi luqinisekisa ukuba imo yezulu ephefumlelweyo ayiphilanga kwaphela, abanye bathi yindawo yokonwabisa, yokuqeqesha kunye neyokonwaba. I-Twitter yenza ukuba isicelo esisemthethweni sifumaneke kumsebenzisi. Nangona kunjalo, uyilo lweapp kunye nokusebenza kwayo Azikho ngoku kwaye abasebenzisi abaninzi bakhetha ukusebenzisa abanye abathengi abanjengo I-Tweetbot 6. Le app idumileyo ihlaziyiwe ngokusungulwa isidlali sevidiyo esitsha esixhasa umsebenzi 'womfanekiso'.
Umdlali wevidiyo omtsha ohambelana nePiP uza kwiTweetbot 6
I-Tweetbot yenye yezona zixhobo ezisetyenziswa kakhulu kwi-Twitter kwihlabathi kwi-iOS. Yisicelo esasimahla kodwa ekuhambeni kwexesha samkela indlela yobhaliso. Okwangoku bonke abasebenzisi baneveki yokulinga kwaye, kamva, kufuneka babhalise ukuze bakwazi ukusebenzisa usetyenziso. Nangona kunjalo, ihlaziywa rhoqo ngokubonelela ngeendaba ezimnandi kunye neempawu njengoko i-Twitter API ihlaziywa.
I-Twitter ibhengeza umsebenzi we "Super Follow" ukufaka iinkangeleko zentlawulo
Le nguqulo intsha ye I-Tweetbot 6 izisa iindaba ezimbini ezibalulekileyo. Enye yazo, ukudityaniswa kwe- umdlali wevidiyo omtsha Ixhasa umsebenzi wePiP okanye womfanekiso-mfanekiso. Ngalo msebenzi singaphuma kwi-app ngelixa siqhubeka nokubukela ividiyo ye-tweet ekuthethwa ngayo, okanye ujonge ixesha lethu ngaphandle kokushiya ividiyo ebuzwayo. Enye into entsha iwela kuyilo kwaye yongezwa umxholo omtsha abawubize ngokuba 'nguMxholo woKhanya oPhakamileyo oPhakamileyo' Ezongezwe kwimixholo eyahlukeneyo esele ikho ukuza kuthi ga ngoku.
Okokugqibela, ii-bugs ezincinci zokusebenza ziye zalungiswa zongezwa iseti entsha yeempawu ukwenza i-icon yeTweetbot kwisikrini sasekhaya sesixhobo sethu.
Tweetbot 6 ye-TwitterMahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Tweetbot 6 ihlaziywa ngesidlali sevidiyo esitsha
UMicrosoft uthenga iNuance, inkampani eyanceda iApple ukuba yenze i-siri
Ungasifumana njani isikrini sasekhaya se-iPhone yakho ngaphandle kweapps